Maxey tahay sababta Adrian Mutu loogu amray inuu bixiyo 15.2 Malyan Oo Pound? – Bandhiga
Maxey tahay sababta Adrian Mutu loogu amray inuu bixiyo 15.2 Malyan Oo Pound?
Weeraryahankii hore Chelsea Adrian Mutu ayaa lagu amray inuu siiyo Chelsea adduun dhan 15.2 Malyan oo Pound kadib markii laga diiday racfaankii uu u gudbiyay maxkamadda Xuquuqda Aadanaha ee Yurub, marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano (ECHR).
Xiddigii hore qaranka Romania kaas oo haatan 39-jir ah ayaa laga ceyriyay kooxda Chelsea sanadkii 2004 kadib markii laga helay inuu isticmaalay dawooyinka awoodda kordhiya, waxaana lagu riday ganaax dhan 7-bilood oo kaga yimid hay’adda FIFA.
Maxkamadda xalinta khilaafaadka ciyaaraha ee (CAS) ayaana ku amartay inuu gudo dhaawacii uu u geystay Chelsea maadaama uu jabiyay heshiiskii uu kula jiray ee dhamaanayay 2009, intaas kadib Mutu wuxuu ku eedeeyay maxkamadda (CAS) ineysan aheyn mid dhex-dhexaad ah maadaama uu xiriir ka dhaxeeyo mid ka mid ah qareenada Blues iyo milkiile Roman Abramovich.
Si kastaba maxkamadda ECHR ayaa si hordhac ah u heshay in Mutu uusan cadeyn eedeymaha markii uu kasoo gudbinayay, waxaana sanadkii 2010 la helay iney Chelsea ku guuleysatay kiiska.